I-Villa de La Suena
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguRichard
Indawo yokuhlala yabucala yeVilla kwiNtliziyo yeCofresi Beach, enedama elikhulu labucala elineengxangxasi ezizolileyo kunye nezihlalo ezibandayo zeqela lokuntywiliselwa. Ikhaya likumgama wokuhamba ukuya kwikhasino, i-marina, iindawo zokutyela ezi-4, imarike, irenti ye-scooter kunye neevenkile ezininzi zesikhumbuzo.
I-Cofresi beach yindawo yokuhlala ezolileyo phakathi kwe-Ocean World kunye neHolide Resorts kodwa ukuba seDominican kungakho ukucima kombane ngamanye amaxesha. Nangona zinqabile, ziyenzeka ngamaxesha athile kwaye njengekhaya labucala akukho jenereyitha.
Wamkelekile ekhayeni lethu. Uya kungena ngomnyango omkhulu obekwe kwigumbi lokuhlala kumgangatho ophantsi. Isicwangciso somgangatho sivuleleke kwigumbi lokutyela kunye nekhitshi ehlulwe kuphela yisethi yepeninsula yeekhabhinethi. I-oki efudumeleyo ekhitshini yenza indawo epholileyo yokupheka. Xa ulandela iholo ukuya ezantsi kukho igumbi lokuhlambela kunye namagumbi amabini okulala. Igumbi lokulala eliphambili linegumbi lokuhlambela eline-en-suite kwaye livuleleka kwibalcony ngasemva kwekhaya. Ukuba uphuma kwigumbi lokuhlala ngeengcango zesilayidi, uya kuba se-balcony. Landela oku ujikeleze kwaye unyuke / ezantsi izinyuko ezimbalwa ukuya kwindawo yedama okanye unyuke izinyuko ukuya kwi-gazebo. Kukwakho neseti yamanyathelo akhokelela kwelinye igumbi lokulala elikumgangatho wesibini elinendawo enkulu egqunywe ngokuyinxenye kunye negumbi lokuhlambela ngokunjalo. Umgangatho wekhaya uyiceramic kulo lonke. Siyalonwabela ixesha lethu singaphandle kunye nephuli kunye ne-gazebo kodwa ukuba kufutshane nolwandle kunokubakho iingcongconi ngamaxesha athile onyaka.
Kukho umrhumo wokucoca we-1500 pesos okanye i-30 USD.
4.33 · Izimvo eziyi-16
Ikhaya likwindawo ezolileyo kakhulu ebandakanya uninzi lweentsapho kunye nomxube weCanada, iMelika kunye neYurophu. Ikufuphi nendawo enkulu yokuphumla. Amapolisa ajikeleza indawo rhoqo esenza le ndawo ikhuseleke kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Richard
Ndinomphathi wepropathi okhoyo, uVictor uvinas. unokufumaneka ku-829-458-7411 okanye ku-WhatsApp njengovictor uvinas.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cofresi